Fiantohana kalitao - Saky Steel Co., Ltd.
Stainless vy bara
Stainless vy manodidina fisotroana
Stainless vy fisaka fisotroana
Stainless vy toradroa fisotroana
Stainless vy zoro fisotroana
Stainless vy fantsona fisotroana
Stainless vy hexagon fisotroana
Stainless vy manodidina sodina
Stainless vy miray volo sodina
Stainless vy toradroa sodina
Stainless vy capillary Tube
Stainless Steel mety tsara Special Sodina
Takelaka vy tsy misy vy
Stainless vy taratasy
Stainless Steel haingon-trano Sheet
Kodiarana Stainless Steel
Stainless vy tariby
Stainless vy mamirapiratra tariby
Stainless vy lohataona tariby
Stainless vy kely tariby
Stainless vy welding tariby
Stainless vy tariby tehina
Stainless vy Profile tariby
Stainless vy tariby tady
Firaka Nickle andian-dahatsoratra
Ny kalitao dia ampahany lehibe amin'ny SAKY STEEL Business Principle. Ny politikan'ny kalitao dia mitarika antsika hanatitra vokatra sy serivisy mihoatra ny andrasan'ny mpanjifa ary mahafeno ny fenitra rehetra. Ireo fitsipika ireo dia nanampy anay hahazo ny fankatoavana ho mpivarotra atokisana avy amin'ny mpanjifa manerantany. Ny vokatra SAKY STEEL dia atokisan'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao. Ity fifampitokisana ity dia mifototra amin'ny sary manara-penitra sy ny lazanay amin'ny famoahana tsy tapaka vokatra avo lenta.
Manana fenitra mifehy ny kalitao hentitra izahay, izay hanamarinana ny fanarahan-dalàna amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso tsy tapaka sy fanombantombanana tena ary fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo (BV na SGS). Ireo fenitra ireo dia miantoka ny famokarana sy famatsiana vokatra izay manana kalitao tsara sy mifanaraka amin'ny indostria mifandraika amin'izany sy ny fenitra mifehy ny firenena izay iasanay.
Miankina amin'ny fampiharana sy ny fepetra momba ny fandefasana teknika na ny famaritan'ny mpanjifa azy dia azo atao ny manao fitsapana manokana isan-karazany mba hahazoana antoka fa hitazona ny fenitra avo lenta. Ny sangan'asa dia nampiana fitaovana fitiliana azo antoka sy fandrefesana ho an'ny fanandramana manimba sy tsy manimba.
Ny fitsapana rehetra dia ataon'ny olona manana kalitao voaofana mba hanarahana ny torolàlana momba ny rafitra Quality Assurance. Ny voasoratra ao amin'ny boky 'Manual Assurance Manual' dia mametraka ny fomba fanao momba ireo toro lalana ireo.
Hizaha fitsapana Spectrum
Fitaovana spectral mipetraka
CS Fitsapana fitambarana simika
Fitsapana ny vokany
Fitsapana ny hamafin'ny HB
Fitsapana HRC henjana
Fitsapana ny kolikoly intergranular
509 Edunburgh Tower NO.139 Hengxi Road Minhang District, Shanghai, Sina 201112
Fa ny fanontaniana momba ny vokatra na pricelist, Masìna ianao, avelao ny mailaka ho antsika Izy ary ho mifandray ao anatin'ny 8 ora.